Omano ny Mac anao amin'ny fahatongavan'ny macOS Sierra | Avy amin'ny mac aho
Tena akaiky ny fahazoana ny kinova manaraka ny rafitry ny fikirakirana ho an'ny Mac izahay ary izany dia mitondra antsika amin'ny iray amin'ireny fotoana ireny rehefa tsara ny manakana kely ny gadon'ireo fanavaozana misesy ary mandinika ny fametrahana amin'ny fomba mitandrina kokoa . Ny marina dia ireo dingana izay ho hitantsika etsy ambany ireo dia azo tanterahina amin'ny fotoana rehetra ary tsy ilaina ny miandry fanavaozana ny rafitra vao hanao izany, fa amin'izao fotoana izao rehefa hametraka rafitra fiasa vaovao isika dia mety ho ny fotoana tsara indrindra satria mila dingana vitsivitsy kokoa noho ny fametrahana indray eo ambonin'izay efa ananantsika.
Mazava daholo isika fa ny rafitra fikirakirana Mac manaraka dia hatao hoe macOS Sierra ary ato amin'ity kinova ity dia misy vaovao mahaliana ampiana fa miorina amin'ny rafitry ny rafitra miasa ankehitriny, OS X El Capitan. Ny talata 20 septambra ho avy izao no hananganana ny rafitra fiasa vaovao ary ny lahasa izay hataontsika izao dia ny fanomanana ny Mac amin'izany andro izany. Amin'izany no ahazoantsika habaka disk bebe kokoa, hadio ny Mac ary ho vonona amin'ny fanavaozana, ary traikefa tsara kokoa amin'ny fampiasana miaraka amin'ny rafitra vaovao.
Ny voalohany sy manan-danja indrindra milaza fa misy fomba roa hanavaozana ny rafitra fiasan'ny Mac, ny voalohany dia amin'ny alàlan'ny fampidinana ny rafitra avy amin'ny Mac App Store sy ny fanarahana ny dingana fametrahana, ary ny faharoa dia ny fametrahana ny rafitra amin'ny rangotra. Na ahoana na ahoana, ny zava-dehibe alohan'ny hanaovana ny fandidiana dia fototra hanatanterahana fanadiovana ankapobeny ny rindranasa, ny rakitra ary ny angona hafa izay tsy ampiasainay intsony ary mazava ho azy fa manao kopia backup alohan'ny handraisana fepetra.
1 Manadio ny Mac
2 Atsaharo ny Mac-nao
Manadio ny Mac
Amin'ny toe-javatra rehetra io no dingana lehibe indrindra ary azo antoka fa hitaky fotoana bebe kokoa isika, koa andao haka mora izany ary hanao asa tsara. Ho an'ity asa ity dia manana rindranasa vitsivitsy ihany koa izahay izay hanampy anay hanadio ny Mac, ohatra CleanMyMac, fa ny tsara indrindra dia ny manafoana ireo rakitra cache, esory ireo fanitarana tsy ilaina, ireo rakitra amin'ireo fanavaozana taloha, installers sy ireo rindranasa rehetra izay tsy nampiasainay nandritra ny iray volana mahery ary avy eo ampitainay ilay rindranasa raha toa ka efa nividy azy izahay.
Ny zavatra tsara indrindra dia ny mandeha tsikelikely ary mamela ireo zava-dehibe indrindra izay tena ampiasaintsika amin'ny Mac ihany. Rehefa mandeha ny fotoana dia hanana ny Mac feno zavatra izay tsy ampiasaintsika isika raha manao io fanadiovana kely io isaky ny fanavaozana hahazo traikefa tsara kokoa amin'ny lafiny rehetra isika miaraka amin'ny rafitra fiasa vaovao.
Azo heverina fa mpampiasa maro no milaza fa tsy ilaina izany ary tena afaka manao izany isika raha tsy izany, fa rehefa misy ny olana ary tsy manana ny kopia natao isika dia nenina daholo ka ny zavatra faharoa hataontsika raha vantany vao misy ny Mac madio amin'ny fisie, data ary antontan-taratasy izay tsy tadiavinay, dia kopia fiarovana.
Ny fomba tsotra indrindra hanatanterahana an'io kopia io dia ny fampiasana ny fitaovana natolotr'i lhanana Apple amin'ny Macs antsoina hoe Time Machine. Tsotra be ireo dingana ary afaka mitahiry ireo kopia any amin'izay ilaintsika koa isika, na kapila Mac-nay izany na kapila ivelany. Ny Time Machine dia manolotra safidy hanao kopia nomaniny ho azy mba hanohanana hatrany ny angon-drakitra ataonay ary io no amporisihanay amin'ny hoe avy any Mac aho amin'ity asa ity. Ireto ny dingana hanatanterahana ny backup:
Manokatra ny Time Machine avy eo amin'ilay kisary ao amin'ny tsipika menio na avy amin'ny Launchpad ao amin'ny folder «hafa»
Azontsika atao ny manamboatra kopia mandeha ho azy na manindry raha te hitahiry kopia amin'ny kapila
Misafidy backup izahay raha toa ka efa napetrakao io na kitiho ny kapila ivelany mifandray
Tsindrio ny backup ary eo ihany
Avy amin'ny kisary ao amin'ny menio dia afaka manamboatra backup isika amin'ny alàlan'ny fanindriana mivantana ny safidy "Manaova backup izao". Na izany na tsy izany zavatra mety tsy ilaina amin'ny mpampiasa rehetra io fa tsara ny hanaovana izany mba hisorohana ny olana ary hanana hatrany ny Mac amin'ny fampisehoana farany ambony. Aza adino fa ny macOS Sierra 10.12 dia ho hita amin'ny herinandro ambony ary afaka manomboka manao izany isika dieny izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Omano ny Mac anao amin'ny fahatongavan'i macOS Sierra
Ny tsara indrindra dia ny mametraka avy eo am-boalohany, avy amin'ny USB
Merci Durango dia hoy izy:
Ahoana ny fomba anoloranao izany raha tsy manome torohevitra azy ireo teknisiana Apple.
Mamaly an'i Merci Durango
Satria fomba iray misy fahasarotana sasany izay tsy mora ho an'ny ankamaroan'ny olona izay mametra ny tenany hiasa na hianatra fotsiny amin'ny mac-ny, ka raha misy ampahany amin'ilay fizotrany tsy mety dia mety hiafara amin'ny fanimbana fampahalalana sarobidy izay Mazava ho azy, ho antony fitakiana ataon'ireo mpampiasa izany.
CleanMyMac matotra…. ???
Nildan dia hoy izy:
Durango, inona no lazainao?
Valiny tamin'i Nildan
Namidiko kely ny ahy fa homaniko. Ny fanavaozana tsirairay dia nisarika loharano bebe kokoa. Nanana ondrilahy i7 sy 16gb aho ary imac 21,5 core dia nandeha haingana kokoa. Eny, nanao ny zava-drehetra aho tamin'ny voalohany. Nandany fotoana nitovy ihany ny famerenana ny taratra blu. Tamin'io fotoana io ihany
Alonso de Entrerríos dia hoy izy:
Clean My Mac dia azo ampiasaina tanteraka, tsy manimba ny solosaina na ny rafitra mihitsy.
Etsy ankilany, ity kinova OS X vaovao ity dia tsy manampy zava-baovao amin'izay efa ananan'ny El Capitan (afa-tsy ny SIRI sy ny sary roa).
Raha ny marina dia tsy mendrika ny apetraka raha mandeha tsara ny solosainao
Mamaly an'i Alonso de Entrerríos
Roberto Payares Ochoa dia hoy izy:
ny tsara indrindra amin'ny tsara indrindra, izay azon'izy ireo atao sy izay niasa ho ahy, dia ny miova amin'ny drive SSD, ny macbook pro miaraka amin'ny i7 sy 16gb amin'ny ram, miaraka amina kapila matevina 500gb, na firy na firy ny fotoana tokony hapetrako avy amin'ny rangotra esory ny zavatra, mampiasa cleanmy mac, sns, sns, mbola miadana izy io, andevozin'ny habaka malalaka sy fampiharana tsy ilaina sns, fa ny faharetana eo. Nanapa-kevitra ihany aho tamin'ny farany hanome ny vintana farany ary hiova amin'ny kapila SSD, napetraka hatramin'ny voalohany, inona ny fiheverana fa ela kokoa aho vao nanao kafe rehefa napetraka ny zava-drehetra sns, manararaotra ireo fotodrafitrasa sy ny fitaovana toy ny tselatra, maka indray 10 segondra ary talohan'ny tsy namonoako azy mihitsy satria naharitra 3 minitra vao tonga teo amin'ny efijery an-trano, na dia notsoahiko aza ny afo satria mora miadana kokoa izy io. Ary tamin'ity alahady ity dia nametraka ny GM an'ny Sierra aho ary naharitra 6 minitra ny fanavaozana azy, tsy dia nisy dikany izany firafitra izany, tsy tsapako hoe oviana izy io no nifarana. Ny moraly amin'ity tantara ity dia, na iza na iza manana mac ary efa mampiseho famantarana ny fahanterana satria miadana be izy, ary raha ny safidy hanova vaovao dia tsy ao anatin'ny drafiny, ary amiko satria manana lasa tena tiako ny 15 ″; Raha ny marina, ny SSD dia mamelombelona anao hatramin'ny farany, ho eken'ny ekipanao izany ary haneho anao izy io. Heveriko fa miaraka amin'izany aho manana taona maro hafa na raha maharitra ny SSD, fa tena faly aho indrindra noho ny hafainganana tsy miova izay mitazona na inona na inona raha manana habaka malalaka malalaka, ary koa ny bateria maharitra ela kokoa, mazava ho azy satria tsy misy rafitra mekanika ao anatiny.
Valiny tamin'i Roberto Payares Ochoa
Jose Carlos dia hoy izy:
Miombon-kevitra amin'i Roberto aho. Ny SSD dia fiainana. Raha ny amin'ny vola dia hametraka SSD gsung 500 gb aho. Raha manana paty aho, 1TB
Valiny tamin'i Jose Carlos
Salama, na ho an'ny mpanoratra ny lahatsoratra na ho an'ireo mpandray anjara: ho antsika izay manana fizarazaran-kevitra vita amin'ny BootCamp miaraka amina Windows dia azo atao ny mametraka fametrahana madio tsy hamafana ilay fizarazaran'i Win, izany hoe, io ihany napetraka ao amin'ny fizarazarana MacOs nefa tsy misy fanovana ny iray hafa?
Iris Martinez dia hoy izy:
Salama! Nanana ny mac-ko nandritra ny 3-4 taona teo ho eo aho ary mbola tsy nanao fametrahana madio mihitsy. Tsy te hikasika na inona na inona amin'ny fizarazaran-javatra sy ny zavatra hafa aho satria azoko antoka fa hokorontaniko izany ... Ny fanontaniako dia; Raha hamafa ny zava-drehetra ao amin'ny mac-ko aho ary avelako ho toy ny vaovao avy amin'ny ozinina, avy amin'ny App Store rehefa mivoaka i macos sierra, azoko atao ve ny mametraka azy mivantana nefa tsy mila mametraka ireo teo aloha? Misaotra mialoha.
Valiny tamin'i Iris Martínez
Arakaraka. Inona ny OS X napetrakao amin'izao fotoana izao?
Jose Eduardo Troconis Ganimez dia hoy izy:
diovy ny mac-nao dia tsy maintsy mividy ianao satria raha tsy izany ny fanadiovana izay ampiasainy dia megabytes vitsivitsy fotsiny !!!, tsy voalaza ao amin'ny hoe AMIN'NY MAC !!!
Valiny tamin'i Jose Eduardo Troconis Ganimez
Ity no ahafahanao miaro ny Trackpad MacBook anao amin'ny lozam-pifamoivoizana mety hitranga
Manafika an'i Apple indray i Microsoft amin'ny Surface Pro 4 -nany